Daawo Haweeneey Soomaaliyeed oo ka cabanaysa ninkeeda oo caadaystay inuu dabada uga galmoodo & iyadoo khaati ka tagaan arinkaas | shumis.net
Home » galmada » Daawo Haweeneey Soomaaliyeed oo ka cabanaysa ninkeeda oo caadaystay inuu dabada uga galmoodo & iyadoo khaati ka tagaan arinkaas
Daawo Haweeneey Soomaaliyeed oo ka cabanaysa ninkeeda oo caadaystay inuu dabada uga galmoodo & iyadoo khaati ka tagaan arinkaas
Waxaa fariin qoraal ah naga soo gaadhay marwo soomaaliyeed. Fariinteeda ayaa sidaan u qornayd:
“Asc walaalayaal waan idin salamaay Warka24.com, salaan kadib magacaygu waa hooyo Soomaaliyeeed oo ku nool mid ka mid ah wadamada Yurub. waxaan ahay xaas 3 caruur ah haysata, dhowrkii sano ee dambeeyay waxaa i haystay mushkilo aad u weyn. Ninka iqaba waxa uu caadaystay markaan isku tagayno ijmaaca inuu aado gadaal aniga arintaas waan ka karaahiyaystay. marar badan waan ka diiday laakiin wuu igu qasbaa. Waagi hore marmar dhif ah ayay ahayd laakiin waayadaan dambe wuxuu ka dhigay mid joogta waan u muujiyay inaan necbahay arinkaas oo aan aad u dhibsado laakiin ma uu kala jecla. ”
Wacalaykum wasalaam waraxmatullahi wabarakatuh. Walaal aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay kalsoonida iyo su’ashaada aad dooratay qurbo.net inay kaaga jawaabto.
RIIX HALKAAN KA DAAWO JAWAABTA
Title: Daawo Haweeneey Soomaaliyeed oo ka cabanaysa ninkeeda oo caadaystay inuu dabada uga galmoodo & iyadoo khaati ka tagaan arinkaas